SmartNews: Local News Break 5.5.13 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 5.5.13 လြန္ခဲ့ေသာ4ရက္က
Application မ်ား သတင္းမ်ား & မဂၢဇင္းမ်ား SmartNews: Local News Break
SmartNews: Local News Break ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
SmartNews 100+ နိုင်ငံများတွင် 50+ သန်းစာဖတ်သူများအားဖြင့်က download ဆုရသတင်း app ကိုပါ!
SmartNews အရည်အသွေးမြင့်သတင်းခေါင်းကြီးပိုင်းတွင်ကယ်တင်တတ်၏နှင့်ထိပ်တန်းသတင်းကြေညာသူထံမှသတင်းကိုချိုးဖောက်: NBC သတင်း, MSNBC, USA Today, TIME, အဆိုပါ Huffington Post, Bleacher အစီရင်ခံစာ, Quartz, The Verge, Vice, Vox, AP, Reuters သတင်းဌာနက, Buzzfeed, Fast ကုမ္ပဏီနှင့် နောက်ထပ်။
"လျင်မြန်စွာခေါင်းကြီးပိုင်းတွင် Browse သင့်ချန်နယ်များစိတ်ကြိုက်နှင့်သတင်းအော့ဖ်လိုင်းဖတ်ပါ။ SmartNews သည်အခြားပေါ်ပြူလာသတင်း apps များရန်အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့အခမဲ့အခြားရွေးချယ်စရာဖြစ်၏။ "
- က CNET
Breaking သတင်း -
စမတ် Mode ကို -
အကောင်းဆုံးသတင်းစာဖတ်ခြင်းအတွေ့အကြုံအတွက်၎င်းက mode ကို။
ယိသတင်း fetch နှင့်အော့ဖ်လိုင်းတစ်ခုကိုဖတ်ပါ။
- တစ်နှစ်တာ၏အကောင်းဆုံး App ကို 2013 ခုနှစ်, (ဂျပန်) - Google က
SmartNews: Local News Break အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
SmartNews: Local News Break အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
SmartNews: Local News Break အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
SmartNews: Local News Break အား အခ်က္ျပပါ
playerlife213 စတိုး71.64k
SmartNews: Local News Break ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း SmartNews: Local News Break အခ်က္အလက္
APK ဗားရွင္း 5.5.13
ထုတ်လုပ်သူ SoThree, Inc.
ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒ https://www.smartnews.com/privacy
App Name: SmartNews: Local News Break
Release date: 2019-09-13 07:47:12
လက်မှတ် SHA1: 48:7D:E9:5E:56:50:7C:99:4A:07:B3:EC:56:93:E6:74:2A:50:83:23
အဖွဲ့အစည်း (O): Gocro
SmartNews: Local News Break APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ